चिसोसँगै रुघा लाग्यो ? यसो गर्नुहोस् – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
चिसोसँगै रुघा लाग्यो ? यसो गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: १ पुष २०७१, मंगलवार २१:०४
डा. अरुणा उप्रेती – संसारमा शायदै त्यस्तो व्यक्ति होला जसलाई जिन्दगीको कुनै न कुनै बेला रुघा नलागेको होस् । रुघाको लागि झण्डै २ शय प्रकारका जीवाणुहरू (भाइरस) जिम्मेवार हुन्छन् । घरमा वा स्कूलको कक्षामा एक विद्यार्थीलाई रुघा लाग्यो भने उसले हाच्छ्यु“ गर्दा उडेका स–साना जीवाणुहरू स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा पसेपछि रुघा लाग्ने सम्भावना हुन्छ । अझ प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएको, थाकेको, नखाएको बेलामा रुघा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
रुघा लागेको व्यक्ति कोठाका झ्याल–ढोका लगाएर बस्दा जीवाणुहरू त्यही रहन्छन् र रोग कोठामा बस्ने सबैलाई सर्छ । कहिले कुनै त कहिले कुनै प्रकारको जीवाणुको कारणले रुघा फैलिने भएकाले यसको विरुद्ध खोप तयार पार्न पनि गाह«ो छ । संसारका सबैलाई कुनै न कुनै बेला यो रोगले समाते पनि चट्टै निको हुनेगरी कुनै औषधि बनाउन सकिएको छैन । कतिले एण्टिबायोटिक खान्छन्, कतिले विज्ञापनमा देखाएजस्तो चक्की खान्छन् । तर, रुघा निको पार्ने औषधि छैन । यसले ठूलै समस्या नल्याओस् भन्नका लागि केहि रक्षात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ र समस्या भइसकेपछि पनि केहि साधारण उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
रुघा लागेको व्यक्तिको संसर्ग नगर्ने:
रुघा लागेका व्यक्तिको नजीक वा मुखामुख हुने गरी बस्नु हुदैन । यदि बस्नु परेमा मुख र नाक छोप्ने मास्क लगाउनु ठीक हुन्छ । यसै गरी रुघा संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सरसामान र लुगा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
आराम र पानी:
रुघा लाग्नुभन्दा अघि धेरै जना नाक र घाँटीमा के–के खसखस भएजस्तो हुन्छ भन्ने गर्छन् । यस्तो किसिमको अनुभव हुनेबित्तिकै आराम गरेर पर्याप्त मात्रामा पानी (विशेष गरी कागती हालेर) पिउनुपर्छ । पानीको पर्याप्त प्रयोगले जीवाणुहरू पिशाबबाट चाँडै बाहिर निस्कन्छन् । पानी पिउन मन नलागे तरकारीको तातो सूप प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ । रुघा लाग्दा प्रायः खानामा रुचि घट्ने हुनाले सूपको प्रयोग गर्नाले शरीरलाई चाहिने केहि पोषण तत्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा शारीरिक रूपमा धेरै थाक्ने काम चाहि गर्नुहुन्न ।
घाटीमा खसखस भएको बेलामा मनतातो पानीमा नून हालेर घा“टीमा गारगल (कुल्ला) गरेमा दुखाइ निकै कम हुन्छ । सम्भव भए दिनमा ५/६ चोटि, त्यो नभए दुखेको र थुक निल्न गार्हो भएको बेला कुल्ला गर्नुपर्छ । यसले घा“टीको दुखाइ र सङ्क्रमण पनि कम गर्छ । पानीमा अलिकति ज्वानो हालेर कुल्ला गर्दा पनि फाइदा गर्छ ।
मह र कागती:
तातो पानीको वाफ:
सम्भव भएमा त पूरा जीउ नै तातो पानीको वाफमा राख्न सके वा तातो पानीमा बस्न सके शरीरले आनन्द पाउने मात्र होइन, रुघा लाग्दा सूक्ष्म जीवाणुहरूको विषको कारणले दुखेको मासंपेशीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । पानी उमालेर वाफ लिन पनि सकिन्छ । कतिपयले पानीमा बास्ना आउने सञ्चो या टिञ्चर बेञ्जिन पनि हाल्छन् । यसरी वाफ लिँदा नाकमा बास्ना आई सुँघ्न आनन्द आउने र वाफले नाक खोल्ने हुँदा सास लिन सजिलो हुन्छ ।
रुघा लाग्दा प्रयोग गर्ने खासै औषधि त छैन, तर टाउको दुखेको, जीउ दुखेको, ज्वरो आएको कम गर्न सिटामोल जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले आराम पुर्याएर राम्ररी सुत्न सकियो भने पनि भोलिपल्ट जीउलाई धेरै आराम हुन्छ ।
तुलसीको पात र दानालाई २/३ गिलास पानीमा उमालेर आधा गिलास भएपछि पिउनाले धेरै फाइदा गर्छ । घरैमा पाइने तुलसीको पात आजकल चियाका रूपमा पनि बजारमा आउन थालेको छ ।
(डा. उप्रेतीको पुस्तक ‘आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा’बाट)
१ पुष २०७१, मंगलवार २१:०४ मा प्रकाशित